အဋ္ဌမတန်းက စတင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို4Skills ပြောင်းဖို့အဆို ရှုံးနိမ့် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း အဋ္ဌမတန်းက စတင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို4Skills ပြောင်းဖို့အဆို ရှုံးနိမ့်
အဋ္ဌမတန်းက စတင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို4Skills ပြောင်းဖို့အဆို ရှုံးနိမ့်
အဋ္ဌမတန်းက စတင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို4Skills (Reading, Writing, Speaking, Listening) ပါဝင်တဲ့ စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင်ကြားဖို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကို တိုက်တွန်းတဲ့ အဆို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် ၁၁ က အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ထုမေရဲ့ အဆို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီက လွှတ်တော်မှာ မှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိဖို့ တင်ပြရာ အဆိုရှင်အနေဖြင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ အားကန့်ကွက် မဲ (၁၀၂) မဲ၊ ထောက်ခံမဲ ( ၉၆) မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ၆ မဲ အကွာနဲ့ အဆို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
………………. ။ ။ ……………….
အဋ်ဌမတနျးက စတငျပွီး အင်ျဂလိပျစာ ဘာသာရပျကို4Skills ပွောငျးဖို့အဆို ရှုံးနိမျ့
အဋ်ဌမတနျးက စတငျပွီး အင်ျဂလိပျစာ ဘာသာရပျကို4Skills (Reading, Writing, Speaking, Listening) ပါဝငျတဲ့ စနဈ ပွုပွငျပွောငျးလဲသငျကွားဖို့ ပွညျထောငျစု အစိုးရကို တိုကျတှနျးတဲ့ အဆို မဲခှဲဆုံးဖွတျရာမှာ ရှုံးနိမျ့သှားပါတယျ။
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီရဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျမွေ အမှတျ ၁၁ က အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါထုမရေဲ့ အဆို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ တာပါ။ အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတျသကျပွီး ပညာရေးဝနျကွီက လှတျတျောမှာ မှတျတမျးအဖွဈထားရှိဖို့ တငျပွရာ အဆိုရှငျအနဖွေငျ့ မဲခှဲဆုံးဖွတျပေးရနျ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မဲခှဲဆုံးဖွတျရာမှာ အားကနျ့ကှကျ မဲ (၁၀၂) မဲ၊ ထောကျခံမဲ ( ၉၆) မဲ ရရှိခဲ့ပွီး ၆ မဲ အကှာနဲ့ အဆို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Previous articleရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အစိုးရက လုပ်မပေးနုိုင်ခဲ့ဟုဆို
Next articleမြောက်ဦး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင် ဖမ်းဆီးမှု မာန်အောင်မှာ ဆန္ဒပြပြီ